NY TOMBAM-BOKATRY NY ADY LEHIBE FAHAROA[hanova]
I- Tombana teo amin’ny lafiny mponina[hanova]
II- Tombana teo amin’ny lafiny ara toe-karena[hanova]
III- Tombana teo amin’ny lafiny ara toe-karena[hanova]
NY LAMINA VAOVAO MANERAN-TANY NANOMBOKA NY TAONA 1945[hanova]
NY FIRENENA MIKAMBANA[hanova]
1) Ireo dingana niforonany[hanova]
2) Ny tanjon’ny firenena mikambana[hanova]
3) Ny foto-kevitry ny firenena mikambana[hanova]
4) Ireo rafitra sy vovonana ao amin’ny firenena mikambana[hanova]
5) Ny tombam-bokatry ny firenena mikambana[hanova]
NY FIFORONAN’NY VONDRON-TANY SY NY FIVOARAN’NY ADY MANGATSIAKA[hanova]
I- Ireo antony nahatonga ny ady mangatsiaka[hanova]
II- Ireo vondrona roa mpirafy[hanova]
III- Ny fifanandrinan’ny vondrona[hanova]
B- Ny fisindan’ny rahon’ady : 1953 - 1962 (ny firosoana mankany amin’ny filefahana)[hanova]
I- Ireo antony nahatonga ny fisindan'ny rahon'ady teo anivon'ny roa tonta[hanova]
II- Ny fisehon’ny « fiaraha-monina tsy misy rahoraho[hanova]
III- Ny fetran’ny fiaraha-monina tsy misy rahoraho[hanova]
NY FILEFAHANA 1962-1975[hanova]
I- Ireo antonynahatonga ny filefahana[hanova]
Notoerin’ny mpiara-dia taminy ny fanjakazakan’ny Etazonia. Niataka taminy, tsy ho eo ambany fifehezany intsony i Frantsa izay notarihin’ i Charles D
IZAO TONTOLO IZAO TAO ANATIN’NY KIRIZY : 1975 - 1985[hanova]
|} Fampidirana: Niharatsy ny fifandraisana iraisam-pirenena nanomboka ny taona 1975. Nitarika ho any amin’ny ady mangatsiaka vaovao ireo kirizy ara-bola sy ireo dona ara-tsolitany.
A- Ny kirizy ara toe-karena[hanova]
Nihatra teto anivon’izao tontolo izao ny kirizy ara-bola ny 15 aout 1971, rehefa tsy azo natakalo volamena intsony ny vola dollar nohon’ny fihenan’ny sandany vokatry ny ady tany Vietnam sy ny fahamafisan’ny fifaninanana ara-barotra maneran-tany. Nahatonga ny fikorontanan’ny lamina ara-bola maneran-tany ny fampitsaharana ny rafitra ara-b
NY FILEFAHANA VAOVAO NANOMBOKA NY TAONA 1985[hanova]
|} Nanomboka ny taona 1985, dia niroso tamin’ny fitoniana vaovao indray izao tontolo izao taorian’ny fifanenjanana 10 taona nandritry ny ady manara. Ny fahatongavan’I Mikhail GORBATCHEV teo amin’ny fitondrana tany URSS no nahatonga an’io fiovan’ny tantara teo anivon’ny fifandraisana iraisam-pirenena io.
I- Ireo antony nahatonga ny filefahana vaovao[hanova]
Hita tao amin'ny "https://mg.wikibooks.org/w/index.php?title=Tantara_kilasy_famaranana&oldid=4662"
Voaova farany tamin'ny 4 Mey 2022 amin'ny 18:34 ity pejy ity.